नेपाल आज | ओशो तपोवनविरुद्ध स्थानीय आक्रोशितः सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी (भिडियोसहित)
ओशो तपोवनविरुद्ध स्थानीय आक्रोशितः सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी (भिडियोसहित)
बिहिबार, ०६ मङि्सर २०७५ गते प्रकाशित - नेपाल आज
काठमाडौं । निरन्जन तामाङ, गोलढुंगा जितपुर मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हुन् । यो तारकेश्वर नगरपालिकामा पर्छ । तारकेश्वर नगरपालिका र शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज जोडिएका छन् । सोही क्षेत्रमा ओशो तपोवन पनि पर्छ । तपोवनमाथि राज्यले गरेको लगानी देखेर गोलढुंगा जितपुर क्षेत्रका बासिन्दाहरु छक्क परेका छन् । पहुँच र प्रभाव बारे हामीले गोलढुंगा जितपुर मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तामाङसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ सो कुराकानीमा अध्यक्ष तामाङको भनाइको सारः
‘२०५८ सालमा जब नेपाल सरकारले शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्‍यो त्यसको सात वर्षपछि २०६५ सालमा नागर्जुनलाई पनि समायोजन गरेर नेपाल सरकारले २०६५ साल फागुन १२ गते शिवपुरी नागर्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गर्‍यो । त्यस पश्चात नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्जको सीमा वरपर रहेको आवश्यक सीमा निर्धारण गरेर मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भयो । मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भइसकेपछि शिवपुरी नागर्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको वरिपरि एघारवटा समितिहरू छन् । त्यहीसमिति मध्यको एक रहेको गोलढुङगा उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको रूपमा म कार्यरत छु । जहाँसम्म आशो तपोवनको कुरा छ, राजपत्रमा पनि स्पष्ट ३७ रोपनी धार्मिक वन मध्यवर्ती क्षेत्रमा छ । यसको मतलब ३७ रोपनी धार्मिक वन उपभोक्ता समितिको कार्यालय अन्तर्गत पर्छ ।
तपोवनमा २०७३ माघमा हाम्र्रो समिति गठन भइसकेपछि धार्मिक वनलाई कुन हिसाबले के भइरहेको छ भन्ने सोधखोजको प्रक्रियामा थियौं । त्यही अवस्थामा २०७४ को वैशाखमा मुड्कु सिर्जनशील वन र धार्मिक वनको सिमानामा एउटा खोंच छ जहाँ पासाङ लाह्मु हाइवे पर्छ । त्यहाँबाट दुई तीनवटा ट्रकले ढुंगा खसालेछ । ढुंगा खसालेपछि त्यहाँको बोट विरुवा नाश भयो रस्थानीयले निकुञ्जमा उजुरी गरे । हामी गएर हेर्दा ढुंंगाले पुरै रुखविरुवा नाश गरिएको रहेछ । त्यससँगै त्यहाँ तल पर्खाल लगाएर बाटो पनि बनाइएको रहेछ ।
हामीले तत्काल त्यो कामलाई रोक्यौं र कसको सहमतिमा निर्माण भयो भनेर सोध खोज गर्‍यौं । त्यहाँ काम गर्ने मान्छेलाई यो धार्मिक वन हो यसरी यहाँ यस्ता क्रियाकलाप गर्न पाइदैंन भनेपछि त्यहाँबाट यो इस्यू निस्किएको हो ।
धार्मिक वनको नियमअनुसार जुनसुकै वनमा भौतिक संरचना बनाउनुपर्दा त्यहाँको स्वीकृति लिनुपर्छ । कानूनी प्रक्रिया बाहिर भएको कारण कारवाही अघि बढाउनुप¥यो भनेर हामीले निवेदन दियौं ।
सार्वजनिक संस्था ओशो तपोवनले नीति नियम भन्दाबाहिर रहेपछि कानून लाग्नुपर्छ भनेर निवेदन दिएको हुँ । वन मन्त्रालय जाँदा मन्त्रीले स्वामी बाहिर जानुभएको छ उहाँ आएपछि बसेर छलफल गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो । विधिको शासन हो या कानून लाग्ने हो भने सबैलाई लाग्नुपर्छ भनेर मैले भने । मन्त्रीले छलफल गरेर मिलाउनुपर्छ भन्नुभयो । छलफल पनि गर्नुपर्छ र कानूनी रूपमा अघि जानुुपर्ने कुरा मैले राखेँं ।
अनुसन्धान गर्दा ओशो तपोवनका सहायकले जल उत्पन्न प्रकोपले बनाएको भन्ने काम भयो । जल उत्पन्न प्रकोपले कसैलाई हानी नोक्सानी भयो भने संरचना बनाउने हो । धार्मिक वनमा त्यस्तो संरचना बनाउनै पार्इंदैन । यो पनि कानून विपरित हो ।
ओशो तपोवनले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि बाटो बनायो । ओशो भनेको सनातनदेखि चलिआएको धार्मिक स्थल होइन । ओशो त केवल दर्शन हो । विचार हो । त्यो विचारबाट कोही सहमत हुन्छन् भने कोही असहमत । त्यहाँ खोल्सी थियो जहाँ पानी बगिरहेको हुन्थ्यो । शिवपुरी राष्ट्रिय निुकञ्ज जलाधार क्षेत्र हो । पानीको संरक्षण गर्नुपर्ने क्षेत्रमा भवन बनाइदिएपछि त्यसको असर कस्तो हुन्छ ?
हालको संंविधानको धारा ९१÷६ मा स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको अधिकार स्थानीयलाई हुन्छ । धार्मिक वन भन्दा पहिला सामुदायिक वनको पहिला प्राथामिकता हुन्छ । तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय पनि यसको भागीदार हो । निकुञ्ज कार्याललयले पनि सडक डिभिजन कार्यालयले बनाएको बाटो र भवन भत्काउनु भनेर पत्र काटेको छ । कानून मान्ने हो भने त्यो भत्काउनै पर्छ । यदि मानेनन् भने सडक कार्यालयलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउन पहल गर्छौं । जनताले कानून मान्नुपर्ने सरकारी संस्थाले पर्दैन ?
ओशो तपोवनमा भवनहरू व्यापारिक प्रयोजनको लागि बनाइएका संरचना हुन् । नेपाल सरकारले ४ करोड खनाएर बाटो र भवन बनाएको छ भन्ने पनि पत्रपत्रिकामा आएका छन् । त्यो कतैबाट डोनेसन ल्याएर बनाएको पनि हुन सक्छ । तर, अन्तबाट उठेको डोनेसनले मात्रै त्यति धेरै संरचना बन्न सम्भव छैन । त्यसमा नेपाल सरकारले पनि पक्कै व्यापारिक संरचना बनाएको छ । त्यहाँको व्यवहारले त्यो तपोभूमि हो जस्तो लाग्दैन । किनभने तपोभूमि भनेको त गैरनाफामूलक र शुद्ध हुनुुपर्छ । त्यसमा पक्कै नेपाल सरकारले पनि व्यापार प्रयोजनको रहेको छ ।
ओशो तपोवनलाई यो सब गर्न कानूनले नै निर्दिष्ट गरेको छ । सरकारलाई गैरनाफामूलक भन्ने अनि नाफा कमाउने ? त्यो त नेपाल सरकारको सम्पत्ति हो तर सर्वसाधारणलाई त्यहाँ जान छेकवार हुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्ता विषयमा चासो मात्र लिने होइन सोधखोज र अनुुसन्धान गर्नुपर्छ । ३७ रोपनी जग्गामा अहिले ३२ रोपनी भएको छ । उसको आफ्नो जग्गा बढेको छ । यो कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेर्ने कि नहेर्ने ? तत्काल सोधखोज गरेर त्यसको आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
त्यहाँको स्थानीय भएको नाताले भन्नुपर्दा ओशो तपोवनले गरेकोे कुुनै पनि क्रियाकलाप चित्तबुझ्दो छैन । स्थानीयले ओशो तपोवनबाट सामूहिक लाभ पाएका छैनन् । धार्मिक वनमा गरेको गतिविधी, आफ्नो नजिकका व्यक्तिलाई मात्र छिर्न दिइने आदि इत्यादि । तारकेश्वर नगरपालिकामा अहिलेसम्म राम्रो बाटो बनेको छैन । तर आशो तपोवनको लागि सरकारले करोडौं लगानी गर्छ यसको अर्थ के हो ? जल उत्पन्नले आफैं गएर पर्खाल लगाउने सानो कुरा होइन । यो गहन विषय हो ।
सरोकारवालाहरू आफैं नीति नियम ल्याउनुहुन्छ, कर्मचारीलाई अह्राउनुहुन्छ तर आफैं पालना गर्नुहुँन्न । मिलाएर जाने भन्नुको अर्थ के हो ?
कर्णलीका जनताले सिटामोल खान नपाउने, जुम्लाका मान्छेले भात खान नपाउने, काडमाडौंबाट पाँच किलोमिटर पर अतिक्रमण गरेर बसेको संस्थालाई भने राज्यले करोडौं लगानी गर्ने ?
राज्यले विधीको शासन पालना गर्नुपर्‍यो र अनुसन्धान गर्नुपर्‍यो । यदि राज्यले केही कदम चालेन भने हामी मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय मिलेर राज्यको भण्डाफोर गर्छौं । त्यो हाम्रो साझा सम्पत्ति हो र जलाधार क्षेत्र हो । सकभर लडाइ झगडा गर्नु नपरोस् । कानून मान्न्ने कुरालाई सबैैले सहजीकरण गर्नुपर्छ । वन जंगल संरक्षण गर्ने काममा हाम्रो अभियान जारी नै रहन्छ ।’
शब गाड्ने ठाउँ पनि पाइएन ( भिडियोसहित)
नेपालका लागि ‘इण्डोप्यासिफिक रणनीति’ र ‘बिआरआई’ दुवै फाइदाजनक (भिडियोसहित)
प्रधानमन्त्रीको उपचारमा ५ करोड सकियो होला देशचाहिँ ५ हजार टेन्ट मागेर बसेको छ : डा. केसी (भिडियोसहित)
जिब्रो छेड्ने मान्छे नहुँदा रोकियो जात्रा
इन्द्रजात्रामा पक्राउ परेका अध्यक्ष बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुने
पूर्वविद्यार्थीको खर्चमा मुस्ताङमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
पहिलो पटक ह्याम्सको पोखरामा सिएमइ तालिम